बिप्लवलाई चुनौती:प्रमाणित गर,फाँसीमा झुण्डिन तयार छु
गगन खड्का (जीवन ) शनिवार, साउन २८, २०७४ 8107 पटक पढिएको
मैले पार्टी परित्यागको घोषणापछि विभिन्न मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरुमा आम पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई गुमराहमा पार्न अनि जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न नेकपाले संस्थागत रुपमा नितान्त अराजनीतिक र मेरो व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्न गोयवल्स शैलीमा प्रचार गरिरहेको छ । यसबाट नेकपाको नेतृत्व रन्थनिएको कुरा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । मैले यो कुरा बुझेर नै नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु निकै तल गिरेर मिथ्या आरोपहरुमा केन्दि«त हुदाँ समेत खासै प्रतिवाद गरिन । किनकी मैले राजनितिक वैचारिक तहमा देखिएका गैर सर्वहारावादी प्रवृत्तिहरुलाई उजागर गर्दै, त्यसले पार्टी संगठन निर्माण र संघर्षमा देखिएको दिशा हिनताको समस्यालाई प्रष्ट गर्न खोजेँ । जो कुरा यस अघिको विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट ढंगबाट बुझ्न सकिन्छ । अथवा मेरो वक्तव्य अराजनैतिक र व्यक्ति केन्दि«त थिएन । यो सबैले बुझेको कुरा भयो । यसबाट नेकपा र यसका नेता कार्यकर्ताहरु यति धेरै छट्पटिनु जरुरी छैन । किनकी यो पार्टीका कार्यकर्ताहरुबाट मात्र होइन, पार्टीको मूल नेतृत्वबाट भौतिक रुपमा बाँकी नराख्ने सम्मका धम्की आउदा समेत मैले धैर्यता गुमाएको छैन । तथापि नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुले जसरी मेरो नितान्त अराजनैतिक र चरित्र हत्या गर्ने खालका आरोपहरु लगाएपछि त्यसको खण्डन गर्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।
यो मालेमावादी चिन्तन र बिचारबाट च्यूत भएका पाखण्डीहरुको आरोप हो भन्दा अतियुत्ति हुने छैन । किनकि मलाई सुचना बेच्ने के हो ? कसरी बेचिन्छ ? म एउटा अनविज्ञ कार्यकर्ता हुँ । न मेरो कुनै मिडियासंग चिनजान छ न त सम्पर्क नै बरु यो तिमीहरुको पार्टी भित्रको जब्बर समस्या हो । न स्थायी कमिटीका निर्णय बाँकी रहे न पिवी कै । बैठक सकिएकै हुदैनथ्यो तिम्रा दस्ताबेज र निर्णयहरु बग्रेल्ती मिडिया र छापाहरुमा निस्कन्थे । अहिले पनि आइरहेका छन् । यो समस्या तिमी भित्र खोज । आरोपहरुमा अलिकति सत्यता हुनु पर्ने होइन र ? पाखण्डीहरुलाई थाहा हुनुपर्ने हो यसरी झुठको साहरा लिएर गुजारा कति दिन चल्छ ?
मैले चन्दा कति उठाएँ र कसरी को को बाट उठाएँ? म कार्यरत क्षेत्रका कार्यकर्ता र चन्दादाताहरुलाई थाहा छ । मैले चन्दा संकलन गर्दा एक्लै डील गरेर पैसा उठाएको एउटा तथ्य सार्वजनिक गर । मैले जसरी र जत्ति आर्थिक संकलन भयो संस्थागत गरेँ । यसको लागि यथेष्ट तथ्यहरु मसंग सुरक्षित छन् । तिमी पूर्वाग्रहीद्धारा ग्रसित मनुवाहरुलाई थाहा नभए पनि मसंग कति करोडको सम्पत्ति छ मेरो परिवार समाज र जिल्लाबासीलाई थाहा छ । मेरो नेपालगञ्जमा घर, फेन्सी पसल र धन्दाको कुरा छ । तिमीहरुले दुनियाँलाई देखाउन सक्छौ ? घर र फेन्सी कहाँ नेर छ ? र अरु धन्दाहरु कहाँ कहाँ छ सार्वजनिक गर्न चुनौती दिन्छु यी पाखण्डी आरोपहरुमा कुनै तुक छैन । मैले मेरो जन्म थलो आफ्नो गाँउभन्दा बाहिर घर र पसलको त के कुरा एक आना जमिन म मात्र होइन मेरा परिवारका सदस्यहरुको नाममा कतै देखिएछ भने तिमीहरुले दिने फाँसीको सजाय स्वीकार्य छ ।
हो मैले पार्टी भित्र आर्थिक सांस्कृतिक अराजकता र मुख्यत अपारदर्शीताको विरुद्धमा लामो समय संघर्ष गरे । कैयन सिसिएमहरु आशकित हुनु हुन्छ । अपर कर्णाली, एनसेल प्रकरण, चितवनको जग्गा बिक्री, जबस नेतृत्व र केही सिसिएम्हरुले बुझाएको पैसा केन्द«को आयमा जम्मा भएन भनेर नेतृत्व प्रति रोस प्रकट गरेको कुरा मेरो दिमागमा ताजै छ । म पनि यस्तो कुराबाट प्रभावित नभएको होइन । तर पनि व्यक्तिगत टिका टिप्पणीमा अहिले सम्म लागेको थिइन । हिजो पनि जे गरे संस्थाकै हितमा बोले र गरेँ । तर तिमीहरु जस्तै गिरेर आरोप लगाउने हो भने सयौं आरोपहरु तथ्य सहित पेश गर्न सकिन्छ तर म अझै संयम छु । अर्को कुरा तिम्रा कर्तूत र धन्दा त खुल्दै जालान् जनताले धैर्य मात्र गर्दै जानु पर्छ । तर यतिबेला भन्नै पर्ने कुरा के छ भने तिमीहरुका जीवनशैली जनतासंग त दाँज्नै सकिदैन बरु सम्भ्रान्त परिवारसंग पो मेल खान्छन् त । एउटा कुरा तिमीले देश र विदेशमा आफ्ना छोरा छोरीहरुलाई डाक्टर, इन्जिनियर, पढाइरहेका छौ, तिमी महलमा बस्छौ र प्राडो पजेरो चढ्ने गर्छौ । स्रोत के हो कमरेड ? तिमीहरुका छोरा छोरी बुलेट बाइकमा सवार हुन्छन् यसको जवाफ दिनुपर्छ । अरुलाई भन्न कति सजिलो हुन्छ है, आफूतिर फर्केर हेर त अनि गमेर पढ त आफुलाई । तिम्रा आदर्श र व्यवहारमा आकाश जमिनको फरक देख्नेछौ ।
खण्डन गर्न धेरै शब्द खर्चिनु आवश्यक छैन । तर वर्गीय उत्पीडन र सामाजिक विभेदको लडाँईमा बषौं लडेको मान्छे हुँ र अझै जीवन पर्यन्त लड्नेछु । विभेदकारी सोच र संकृणताले ग्रसित तिमीहरु पो छौ त । दुश्मन नै किन नहोस् मिथ्या आरोप र जंगली भाषाको प्रयोग किमार्थ गर्न सक्दिन म । तिमीहरुको झुठो आरोप र असभ्य भाषाबाट तिम्रो चरित्र र संस्कार मज्जाले बुझ्न सकिन्छ । हो, मैले पार्टी भित्रका खराब प्रवृत्तिका बिरुद्ध लडे र कैयन कमरेडहरुलाई गलत प्रवृतिको शिकार नबन्न आग्रह गरे । यसो गर्दा मेरा केही स्वाभाव जन्य कमजोरी रहन गए होलान् तर कोही बाबु साब र दलित भनेर कहिल्यै विभेद गरिएन । केही अराजकताको सिमा नाग्नेलाई कारबाही समेत गरियो जो पार्टीको हितको निम्ति सामुहिक निणर्य थियो । कैयन ठाँउमा तिम्रो पार्टी र कार्यकर्ता बद्नाम छन् । यसले पार्टीको हित पनि गर्दैन । तर केही भ्रष्ट कार्यकर्ताको व्यवहार र नेतृत्वको सोचमा भएको अनौठो मेल मैले बुझ्न सकिन ।
धिक्कार छ प्रतिशोधी मानसिक रोगबाट ग्रस्त संकिर्ण र पूर्वाग्रही महान् क्रान्ति नायकहरुलाई । रविन्द शाहको हत्याको कुरा मेरो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा थियो । मृतक रबिन्द शाह र हाम्रा साथीहरु बीचको हात हालाहालको स्थिति बनेपछि तत्काल बदला लिने प्रतिशोधी भावनाहरु उठ्नु पनि अस्वाभाविक थिएन । जो क्रमशः मथ्थर हुदै गइरहेका थिए । यो घटनाको कैयौ महिनापछि रबिन्द शाहको हत्याको घटना घट्यो । जसले हामी सबै जाजरकोट बासीलाई स्तव्ध बनायो । प्रहरीको अनुसन्धानबाट हाम्रै साथीहरुलाई अभियुक्तको रुपमा जिल्ला अदालत पेश गरी कारबाही चलेको स्थिति हो । भ्रष्ट र बद्नामहरुलाई देशै भरी र हाम्रो व्युरो अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा पनि जनकारबाही गर्ने कुरा नभएको होइन । तर पार्टीको व्यक्ति हत्या गर्ने नीति नभएको कुरा स्पष्ट गरियो । मैले जिल्लाका जिम्मेवार कमरेडहरुलाई बुझ्दा हामीले त्यस्तो कुरा सोचेकै होइन भन्ने जवाफ पाएँ । केही साथीहरुलाई हप्काइयो पनि ।
अर्को कुरा प्रहरीबाट पनि व्यापक अनुसन्धानको प्रकृया सुरु भयो । मेरै विषयमा पनि प्रहरीले गहिरो अनुसन्धान गरेको र कुनै तथ्य प्रमाण नभेटिएको कुरा कानुनी अधिवक्ता ज्यु मार्फत बुझेँ । प्रहरीको अनुसन्धानपछि रविन्द« शाहको हत्याको योजना नभएको र कुटपिट गर्ने क्रममा अधिक वल प्रयोग भई रविन्द«को ज्यान गएको कुरा जिल्ला सरकारी वकिलको रह्यो । करिब यो सत्यताको नजिक जस्तो लाग्यो । यो घटनामा संलग्न भनिएका मान्छेहरु पनि व्यवस्थित योजना बनाइ गएको कुरा बुझिदैन भने कथित हत्याको योजनामा मेरो सहभागिताको त प्रश्नै आएन । जिल्ला अदालतबाट पनि फैसला होला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर यहाँ क्रान्तिका महानायक कहलिएका महासचिव र उहाँका कारिन्दा प्रबक्ताको आरोप हेर्दा कति निच र घटीया मनोवृत्तिका मान्छे रहेछन् भन्ने कुरा जनताले बुझ्न समय लाग्ने छैन । आरोपहरुमा केही आधारहरु पनि त हुनु प¥यो । यदि म हत्याको मुख्य योजनाकार हुँ भने सहयोगी सलंग्नहरु को को हुन् ? के प्रहरीले किटान गरेका अभियुक्तहरु सबैजना हत्याको उद्देश्यद्धारा प्रेरित थिए त ? जवाफ देऊ । कुरा यति मात्र होइन यदि रबिन्द« शाहको हत्या तिमीहरुले भने जस्तै योजना बद्ध थियो भने के तिमीले दोषी देखेका मान्छेहरुलाई कारबाही गर्न र मृतकका परिवारहरुलाई न्याय दिन सक्छौ ?
सबै साथीहरुले रिपोर्ट राखिसकेपछि महासचिवले विषय राख्दै गर्दा भन्नु भयो “ मान्छे खराब रहेछ ठिकै भयो उसका कुकृतिहरु केके हुन् उल्लेख गरेर पर्चा निकालेर जिम्मा लिनु पर्छ ’’ भनेर भन्नु भयो । विषय अनौठो लाग्यो । साथीहरु मुखामुख गर्न थाल्नुभयो । हाम्रो अपेक्षा थियो यस्तो के गरेको पार्टी नीति विपरीत भनेर हप्काउनु होला र सम्भाउनु होला जे होस् गलत परिणाम आयो सामना गरेर जाऔ भन्नु पर्ने हो । महासचिवको जिम्मा लिने कुरा पछि मैले ठाडै असम्भव भनेर तिरस्कार गरे । अझै उहाँले मतिर इंगित गरेर जिम्मा लिने कुरा गरिसकेपछि मैले भने “ न पार्टीको व्यक्ति हत्या गर्ने नीति छ,न व्युरोको योजना, न त निर्देशन मैले किन जिम्मा लिने’’ भनेर प्रतिवाद गरेँ । २०७४ बैशाख १४ को मित्र पार्टी प्यालेसको केसको वैठकमा पनि यस्तै यस्तै प्रतिवाद पछि जिम्मा तपाई नलिने हो भने म लिन्छु भनेर महासचिवको धम्की पछि म केसको वैठकबाट बाहिरिए । विवादको चुरो कुरो यही हो । यो सच्चाईलाई कमरेड माहासचिवले जस्तोसुकै तिक्डम र कुतर्क गरे पनि ढाकछोप गर्न सक्नु हुन्न । यसका साक्षी सबै सिसिएम्हरु जिउदै हुनुहुन्छ ।
महासचिव जस्तो मान्छेले यस्तो मूर्खता पूर्ण कुरा किन गर्नु भयो त ? कुरा बुझ्दै जादाँ जोसुकै मारियुन् र जोसुकै जेल जाउन् कुनै संवेदनशीलता नै देखिएन । उहाँको उद्देश्य भालुको मन कोदो माथि भनेझै हत्याको जिम्मा मातहतका पार्टीले लियो भने “देख्यौ यसरी फटाहाहरु मारिदै छन्’’ भनेर प्रचार गर्ने र केही कुत्सित राजनीतिक प्रभाव बिस्तार गर्ने र अथाहा आर्थिक संकलनको मार्ग फराकिलो बनाउने । केही लाखको ठाँउमा केही करोडको संकलन गर्ने अर्को कुरा हामीलाई मुद्दामा भिडाएर पूर्वाग्रही पनि साँध्न पाइयो । यो भन्दा अरु उद्देश्यबाट जिम्मा लिने कुरा उहाँले उठाएको जस्तो लाग्दैन यो उहाँको आफ्नो आंकक्षा पुरा गर्ने प्रतिशोधी मनोवृति हो ।
यस्ता घटिया र अराजनैतिक आरोप लगाउने हो भने चाहे जनयुद्धकालमा होस चाहे शान्तिकालमा पार्टी भित्र ब्यक्ति सफायका विषयमा बहस हुँदा मैले जहिले पनि ब्यक्ति हत्याको बिरुद्धमा मेरो मत जाहेर गरेको कुरा इतिहास साक्षी छ । यसबाट तिनिहरुले लगाएको हत्याको अभियोग संकिर्ण चिन्तनबाट ग्रसित पूर्वाग्राही मानसिकताको उपज हो । आज तिमीहरुले लगाएका संगीन आरोपबाट निश्चित रुपमा मेरा शुभचिन्तक र आफन्त भ्रमित हुनुभएको छ । मेरा परिवारका सदस्यहरु मेरो श्रीमती र छोरीहरुले आँखाबाट पिडा र आक्रोसका आँसु झार्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । के रविन्द« शाहको हत्यारा तपाई हो ? अनि तपाईले त्यो करोडौको सम्पत्ति कहाँ राख्नु भएको छ र नेपालगञ्जमा घर र फेन्सी पसल कहाँ छ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । मैले जवाफ दिने गरेको छु छोरी यी अशत्ति र दुष्टहरुका आरोप नसुन र यसको कुनै पर्वाह नगर ।
प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखको गाडीमाथि ढुंगा प्रहार 10119